Waxaa magaalada Baku ee dalka Azerbaijani lagu soo gabagabeeyey shirkii madasha adduunka ee 4aad ee UNWTO oo looga hadlayey wada-hadalka dhaqamada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Azerbaijan Breaking News » Waxaa magaalada Baku ee dalka Azerbaijani lagu soo gabagabeeyey shirkii madasha adduunka ee 4aad ee UNWTO oo looga hadlayey wada-hadalka dhaqamada
Wararka Ururada • Azerbaijan Breaking News • Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Wareysiyo • Dadka • Daalacanayo Hadda
Waxaa laga yaabaa 7, 2017
Wasiirada dalxiiska ee adduunka oo dhan todobaadkan waxay aadeen Baku, Azerbaijan si ay uga qeyb galaan Madasha 4aad ee World Forum ee Wadahadalka Dhaqamada.
Kulankaan muhiim ma ahan oo kaliya in la dhageysto madaxweynaha Azerbaijan, laakiin wuxuu kulmiyay musharixiin badan oo u tartamaya xilka Xoghayaha Guud markii ugu dambeysay ka hor inta Golaha Fulinta aysan ku kulmin Madrid May 12 si ay ugu codeeyaan qofka awooda inuu hogaamiyo Dalxiiska Adduunka. laga bilaabo 2018.
Azerbaijan waa shir gudoonka kulanka Golaha Fulinta ee soo socda.
Murashaxiinta ka qaybgalay waxaa ka mid ahaa Madam Dho Young-shim oo ka timid Korea, Hon. Walter Mzembi oo reer Zimbabwe ah (sawirka) iyo Mr. Zurab Pololikashvili oo reer Georgia ah oo aan marar badan lagu arkin munaasabadaha kale ee UNWTO dhowaan.
Xoghayaha guud ee UNWTO ee hada, Mudane Taleb Rifai wuxuu sidaa yiri markii uu la hadlayey dhagaystayaasha Baku:
Waxaan maanta ka dhageysanay fariimo muhiim ah madaxweynaha Azerbaijani ”, Xoghayaha Guud, Ururka Dalxiiska Adduunka (UNWTO) Taleb Rifai ayaa ka sheegay xafladii furitaanka ee Madasha 4aad ee Adduunka ee Wadahadalka Dhaqamada.
Wuxuu xusay in wixii horey u dhacay ay yihiin kuwa soo noqnoqda mustaqbalka: “Hadaan nahay hogaamiyeyaasha caalamka, waa inaan u dhaqaaqnaa dhanka jihada hal markab. Waa inaan si xor ah u bixinaa safarka dadka. Maanta, adduunku wuxuu wajahayaa dhibaatooyin dhowr meelood. Dadku waa inay is ixtiraamaan ”.
Wuxuu sheegay in 10-kii shaqo midkood uu la xiriiro dalxiiska: “Wadaagga dalxiisku wuu sii kordhayaa sannadaha soo socda. Si kastaba ha noqotee, haddii aan awood leenahay, sidoo kale waa inaan qaadnaa mas'uuliyad. Dhaqdhaqaaqa dadka 1,800,000,000 waxay abuureysaa fursad lagu horumariyo dhaqaalaha qaranka ”.
Xoghayaha guud ee UNWTO wuxuu yiri xirfadaha dhalinyarada waxaa laga yaabaa inay horumariyaan iyagoo u safraya meelo kala duwan: Maanta, dulqaad iyo faham la'aan ayaa jirta. Dadku waa inay midoobaan oo ay la dagaallamaan fikradaha la iska aaminsan yahay. Sannadkan waxaa lagu dhawaaqi doonaa inuu yahay sanad dalxiis. Tani waxay noo ogolaaneysaa inaan mideyno dadaalkeena. Caqabadaha caalamiga ah waa laga tirtiri karaa iskaashi. Waa inaan ixtiraamnaa dadka, bay'ada waxaanan ku muujineynaa is ixtiraam tan. Waxaan had iyo jeer u safreynaa Azerbaijan. Azerbaijan waa meel fiican, Dhul Dab. Waxaad haysataa dad wanaagsan ”.
Carruurta xaafadda ayaa bandhig sameeyay intii ay socdeen munaasabadda.